Vaovao - Asa fanitarana ny SJZ CHEM-PHARM CO., LTD-Fitsangatsanganana any Jiulongtan
Asa fanitarana ny SJZ CHEM-PHARM CO., LTD-Fitsangatsanganana any Jiulongtan
Tamin'ny 31 Oktobra 2019, tamin'ity vanim-potoana fararano volamena ity, ny SJZ CHEM-PHARM CO., LTD dia nandamina mpiasa hanao hetsika fihanihana tendrombohitra sy fampandrosoana any amin'ny faritr'i Jiulongtan Scenic, faritanin'i Pingshan, Shijiazhuang.
Manoloana ny masoandro maraina amin'ny maraina, dia nanomboka ny dia lavitra ny fikorontanan'ny tanàna isika. Mandehana mankeny an-tendrombohitra ary mifoka rivotra madio mamelombelona an'ny natiora. Nandritra ny fizotran'ny fiakarana an-kalamanjana, tsy nisy niantsoantso ny mangidy sy ny havizanana, tsy nisy tavela sy nihemotra, ary ny sasany nitady tamim-pahasasarana ny toerana voalohany ary niara-niasa hatrany. Ny havizanana amin'ny fiakarana tendrombohitra dia nivadika ho fifalian'ny fandresena tamin'ny fihomehezana tony. Nandritra ny fampihetseham-batana sy ny fifaliana dia naneho tanteraka ihany koa ny kalitao sy ny sarin'ny ekipanay Chenbang. Rehefa avy nihanika izahay, dia nankany amin'ny tanimbolin'ny paoma mba handray hetsika, nanandrana ireo paoma vao nalaina avy tamin'ny hazo, nanakaiky ny natiora ary nankafy ny hafaliana tamin'ny fijinjana.
Mandray ny asa fitoriana any ivelany ho tetezana, ny fikambanana dia mandrindra mpiasa an-tendrombohitra, mitsimpona orchard ary fiaraha-misakafo hariva, izay manalefaka ny tsindry ataon'ny mpiasa ary mampihena ny elanelana misy eo amin'ny mpiara-miasa. Miteraka fotoana ifandraisan'ny mpiara-miasa izany. Ny tanora mpiasa dia mahazo fahalalana bebe kokoa amin'ny fizarana traikefa an'ny mpiasa efa zokinjokiny, ary ny mpiasa zokinjokiny koa dia voan'ny aretina entin'ny tanora. Ny tsirairay dia manana fahatakarana vaovao momba ny tsirairay ary nanamafy ny firaisan'ny ekipa Chempharm.